Wax ka ogoow waxqabadka dhamaan kooxaha reer England kulamadii ay Barcelona ku booqdeen garoonka Cump Nou – Gool FM
Wax ka ogoow waxqabadka dhamaan kooxaha reer England kulamadii ay Barcelona ku booqdeen garoonka Cump Nou
Dajiye April 16, 2019
(Yurub) 16 Abriil 2019. Barcelona ayaa caawa ku soo dhaweyn doonta garoonkeeda Cump Nou kooxda Manchester United, si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta 2-aad wareega siddeed dhamaadka ee tartanka UEFA Champions League.
Blaugrana ayaa kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonka Old Trafford waxay ku soo adkaatay 1-0, taasoo ka dhigeysa ilaa iyo haatan in kooxda reer Spain ay fursad u heysato u soo bixitaanka wareega afar dhamaadka ee tartankan, marka loo fiiriyo Manchester United.
Kadib guushii Barcelona ay ka gaartay kooxda Manchester United kulankii lugta hore, waxay shaqsiyaad badan filayaan in Blaugrana ay u gudbi karto wareega xiga ee tartankan, maadaama ay ku ciyaareyso garoonkeeda Cump Nou, iyadoo ay qeyb ka yihiin kulankan xidigaha sida Lionel Messi.
Fursada ay ku dooneyso kooxda Manchester United inay ugu soo baxdo wareega afar dhamaadka ee tartanka UEFA Champions League ayaa u muuqata inay tahay shaqo aad u adag, maadaama ay caawa marti ku noqonayaan garoonka Cump Nou, kadib guuldarada kulankii lugta hore.
Yeelkadeeda, kooxda Barcelona ayaa faa’iido weyn ka heysata kooxaha reer England marka loo fiiriyo kulamadii ay kula ciyaartay garoonkeeda Cump Nou, mana aysan kala kulmin wax guuldaro ah marka laga reebo 2 kulan oo kaliya, waana rikoor cajiib ah oo ay Blaugrana ku sameysay garoonkeeda.
Barcelona waxay kula ciyaartay 33 kulan rasmi ah kooxaha England garoonkeeda Camp Nou, waxay guul gaartay 20 kulan, waxaa laga badiyay 2 kulan oo kaliya, halka ay barbaro la gashay 11 kulan, taasoo muujineysa faa’iidada weyn ay Blaugrana ka heysato kooxaha England.
Valverde oo si RASMI ah u magacaabay liiska Barcelona kulanka caawa ee kooxda Manchester United